Maitiro ekuwedzera ekuwedzera anoshanda skrini nguva pane iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Imwe yesarudzo idzo vashandisi veApple Watch vainadzo ndeyekugadzirisa iyo skrini kwenguva yakareba. Tinogona kuita iyi gadziriso nyore pane ese Apple Watch mamodheru, asi mu Series 5 uye Series 6 inorasikirwa nepfungwa nekuda kweyakagara-pane yekuratidzira ficha yavanayo.
Basa iri Izvo zvinonyanya kubatsira kune vashandisi vane iyo Apple Watch Series 4 kana apfuura mavhezheni yeApple smart wachi. Chero zvazvingaitika, basa racho rinogona kugadziriswa zviri nyore muApple Watch yega pachayo mukati meiyo iPhone uye nhasi tichaona maitiro ekugadzirisa ino nguva kuita gumi nemashanu kana makumi manomwe masekondi.
Screen inoshanda 15 kana 70 seconds
Hatinzwisise chaizvo kuti pane zvingasarudzwa zviviri zverudzi urwu rwekugadzirisa asi chiri chinhu chakamboita seichi kubva kumamodeli ekutanga ewatch uye chisina kumboshandurwa. Unogona kumutsa chidzitiro kwemasekondi gumi nemashanu kana makumi manomwe, hapasisina dzimwe sarudzo dziripo.
Mune ino kesi, yakajairwa kumisikidza ndeye gumi nemashanu masekondi, saka kana ukangobata skrini inoramba ichiitwa mukati memasekondi gumi nemashanu. Kuti uwane iyi gadziriso kana iwe uchida kuwedzera ino inoshanda skrini nguva, iwe chete unofanirwa kuwana iyo wachi application pane yako iPhone, tinya pane General uyezve iyo Activate skrini sarudzo. Muchikamu chino, pamusoro peiyo inoshanda skrini yekugadzirisa nguva, isu tinowana dzimwe sarudzo dzekumisikidza senge yekumisikidza kana uchisimudza ruoko, kuratidza iyo yekupedzisira app kana kuvhura odhiyo kunyorera otomatiki.
Kugadziriswa kuri nyore asi izvo zvinogona kunakidza vashandisi vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuwedzera ekuwedzera anoshanda skrini nguva paApple Watch
Chokwadi Chinotaurirwa kuratidza Kate Hudson mumwaka wechipiri